परिस्थिति बिग्रियोस्, मनस्थिति नबिग्रियोस्
संकेत कोइराला बाबु : हेर न छोरी खातापिता एउटा शाखा अधिकृतको कुरा आ’को थियो । छोरी : (फन्किँदै) के म यो घरका लागि धेर भाकी हुँ । मलाई गर्नु छैन बिहेसिहे । (दुई महिनापछि ) बाबु : छोरी, हेर त सरकारी अस्पतालको डाक्टर रे ! एमडी गर्दै गरेको, हेर्दै लायक केटा रहेछन् । के छ तिम्रो विचार ? छोरी : (झोकिँदै) मलाई किन बारम्बार तनाव… विस्तृत समाचार
किन बाटो बिराउँछन् कामरेड
नारायण नेपाल संसारका धेरै मुलुकमध्ये नेपाल गाउँ र सहरमा वामपन्थी जनमत व्यापक भएको विरलै देशमध्येको एक देश हो हाम्रो नेपाल । नेपाली जनताले तिनै कम्युनिस्टबाट देश र जनताको समृद्धिका लागि निकै आशा र भरोसा राख्दै आएका छन् । हजारौं दुःख कष्टका बाबजुत जनताको आँसु–रगत र पसिनाको भेलमा स्थापित भएका हुन् नेपालका कम्युनिस्ट । तर, आज–भोलि नेपालका सरकारी कम्युनिष्ट भन्नेहरूको चर्तिकला पनि अचम्मको छ । कसलाई… विस्तृत समाचार
हामी त थरुनी, कसो गरूँ नि !
नीरा भगत थारू आफ्नै भाषा, आफ्नै भेष । पोसाक र परिवेश पनि आफ्नै । मौलिक खाना तथा मौलिक व्यवहार एवं मौलिक कार्यशैलीयुक्त जीवन पद्धति । यी हुन्, थारू समुदायको जीवनचर्या । थारूमा छोराछोरीबीच, छोरी–बुहारीबीच, बुहारी–बुहारीबीच तथा धनी–गरिबबीच सम्बन्धमा कुनै फरक पर्दैन । घरमा कामको बाँडफाँड उमेर र शारीरिक अवस्थाका आधारमा गरिन्छ । नाता र लिंगको आधारमा विभेद गरिँदैन । काम त पुरुषले पनि गर्छन् ।… विस्तृत समाचार
वैकुण्ठ ढकाल कुनै बेला पुष्पकमल दाहाललाई लोकमान कार्की नभई भएन । हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने पुरानै बानीबाट दाहाल अहिले पनि आक्रान्त छन् । ४ कात्तिकमा सांसदको प्रस्तावमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई निद्रा लागेन । अब महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म निद्रा नलाग्ने अवस्था आइसकेको छ । समय कत्ति बलमान भइदिन्छ भने, शीर्ष भनिए पनि नेताको शिर छ कि छैन भन्नेमा… विस्तृत समाचार
रमण पनेरु मधेसीप्रतिको खरो बोली र बेलाबेला विवादमा आउने केपी ओलीका अभिव्यक्तिले ओली र मधेसीबीच एक किसिमको दूरी सिर्जना भएको थियो । त्यसैका कारण पनि ओली एक्लिए र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अनुभवका आधारमा आफूबाट भएका गल्ती यसपटक नदोहो¥याउने र सरकारको निश्चित आयुलाई ध्यानमा राख्दै काम गरेर देखाउने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले खासै सहानुभूति पाउन सकेन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा… विस्तृत समाचार
संकेत कोइराला एउटा काग आपूmलाई संसारको सबैभन्दा हिरो ठान्दो रहेछ । घुम्दै जाँदा एकदिन हिउँजस्तो सुकिलो बकुल्लासँग जम्काभेट भएपछि उसको घमण्डको पारो झरेर शून्यमा पुगेछ । बकुल्लाको सौन्दर्यमा लठ्ठ पर्दै जिज्ञासा राखेछ, ‘म आपूmलाई संसारको हिरो भन्ठान्थें तर तिमीलाई देखेपछि आपूmलाई फिका सम्झिन थालेको छु । तिम्रो जीवन कति सुन्दर होला । तिमी कति सुखी र खुसी हौला है !’ कागको बखान सुनेपछि बकुल्लाले चिसो… विस्तृत समाचार